Ny fanalahidin 'ny J & S Botanics ny fahombiazana no mandroso ny teknolojia. Hatramin'ny ny orinasa naorina, dia antitranterina foana amin'ny mahaleo tena fikarohana sy ny fanavaozana. Nanamby an'i Dr. Paride izahay avy any Italia toy ny lehiben'ny mpahay siansa, ary nanorina 5 mpikambana R & D ekipa manodidina azy. Tao anatin'ny taona maromaro, ity ekipa efa lasa ampolony ny vokatra sy ny vaovao manan-danja maro namaha olana ara-teknika ny manatsara ny famokarana dingana. Noho ny fandraisana anjara, ny orinasa mitsangana avy ao amin'ny orinasa na ao an-toerana sy eo amin'izao tontolo izao. Isika ihany 7 Patents izay mandrakotra lafiny samihafa amin'ny fitrandrahana teknolojian'ny. Teknolojia ireo dia manome fahafahana antsika mba hamokatra ambony voajanahary koa omen'ny amin'ny fahadiovana, niteraka asa ambony, ambany ambany sisa amin'ny fanjifàna angovo.
Ankoatra izany, J & S Botanics no fitaovam-piadiana ny mpikaroka amin'ny toetry ny kanto fitaovana laboratoara. Ny foibe fikarohana dia fitaovana kely sy salantsalany fitrandrahana tanky, ny Rotary evaporator, madinika sy salantsalany chromatography tsanganana, boribory concentrator, banga kely paharitry milina sy Mini dipoavatra maina tilikambo, sns famokarana rehetra dingana tsy maintsy naka fanahy sy nekena ao amin'ny ny laboratoara talohan'ny famokarana faobe ao amin'ny orinasa.
J & S Botanics mihazona lehibe R & S tahirim-bola isan-taona izay maniry isan-taona amin'ny 15% ny tahan'ny. Ny tanjontsika dia ny hanampy roa vaovao sy ny vokatra isan-taona, dia toy izany, antoka antsika mpitarika orinasa eo amin'ny fototra fitrandrahana orinasa eto amin'izao tontolo izao.